Reporting services — MYSTERY ZILLION
January 2009 edited January 2009 in C#
I am also learing C#.I want to make reports with reporting services.
I didn't use reporting service before.I want to learnafew samples.So,if u have,share your samples,please.
Mgmg(Violinist) wrote: »
reporting service ဆိုတာ Database ကပေးတဲ့ Service ကိုပြောတာလား .net ထဲမှာဘဲ reporting ရေးတဲ့ Crystal Report အကြောင်းပြောတာလားဗျ။ SQL Server က reporting service ဆိုရင်တော့ ကိုလူပျိုကြီး ပြောလိမ့်မယ်။ သူက ဒေတာဗေ့ ဂုရု :71: ။
ဟုတ််ပါတယ်ိ်ခင််ဗျာ SQL က Reporting Services ကို ပြောတာပါ
SQL က Reporting Servicesက ို သုံးပြီး C# မှာReport ထုတ်ချင်တာပါ